(GMT+08:00) 2007-07-27 08:56:02
साझा लक्ष्य र साझा हितका निम्ति सामूहिकरूपमा मिलेर काम गर्नुलाई सहकारी पद्धति भनिन्छ। सामूहिता, साझेदारी र सामाजिकीकरणको सभ्य रीति पनि हो यो। ओमदेवी मल्ल जोशीले आफ्नो अध्ययन अनुसार प्रश्तुत गर्नु भएको लेखनमा आजको युग ठेकेदारीको होइन, साझेदारीको जमाना हो। साझेदारीको भावनाको विकास नै सहभागिताको आधारभूत विकास हो भनि उल्लख गर्नु भएको छ।
जस अनुसार उहँले लेख्नु भएको छ की गरिबी निवारण, नेपालको सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिको प्रारम्भिक लक्ष्य हो। नेपाली समाजमा गरिबीको जुन दुश्चक्र छ, त्यसमा अशिक्षा, बेरोजगारी, समन्वयको अभावजस्ता पक्षहरूले एउटा चक्र नै बनाएका छन्। गरिबीको यस्तो दुश्चक्र तोड्ने काम न त व्यक्तिगत प्रयासबाट सम्भव हुन्छ। न त सरकारको एकाङ्की पद्धतिले मात्र र्सार्थकता दिन सक्छ। अतः सरकार तथा निजी क्षेत्रका बीच साझेदारी र समाजका समान लक्ष्य र समान हितका पक्षधर समुदायका बीच सामूहिक प्रयासको जुन सिलसिलाबद्ध कार्यप्रणालीको परम्परा स्थापना गरिएको छ, त्यही हो सहकारिताको सिद्धान्त, यसमा एकसाथ काम गर्ने संस्थागत कार्यप्रणालीको विकास गरिएको हुन्छ। नेपालमा सहकारिताको कार्यपद्धति सुरु भएको आधा शताब्दी बितेको छ। हरेक वर्षचैत्र 20 गते सहकारी दिवस पर्दछ। यसैक्रममा 2063 साललाई सहकारी स्वर्ण वर्षको रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी मनाइएको तथ्यसमेत यहाँ स्मरणीय नै छ।
गरिबी, बेरोजगारी र समाजको पछौटेपन हटाउने उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय आवश्यकताबोध भएर नै 2010 सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो। त्यसबखत विश्वमा आएको साझेदारी र सहकार्यको लहरलाई नेपालले पनि आत्मसात् गरेको थियो। सुरुका वर्षरूमा सहकारी पद्धतिले द्रुतगति लिन सकेको थिएन, तथापि सहकारी प्रणालीका बारेमा जनताले जान्ने अवसर पाए तथा समाजमा व्याप्त समस्या, अभाव र सङ्कटको सामूहिक प्रयास र प्रभावकारी ढङ्गले हल गर्ने उपायको रूपमा जनताले सहकारीलाई क्रमशः चिन्दै जान थाले। त्यसपछि 2013 सालमा बखानपुर सहकारी संस्थाको स्थापना भयो। सबैभन्दा पहिलो सहकारी संस्थाका रूपमा यसले इतिहास बनायो। सहकारी विभागको स्थापना भएको6वर्षछि आएर 2016 सालमा सहकारी संस्था ऐन जारी भयो। तत्कालीन संसद्ले सो ऐनको तर्जुमा गरेपछि सहकारीतर्फर्सवसाधारणको राम्रोसँग ध्यानाकर्षा भयो। 2018 सालमा मिश्रति अर्थतन्त्रको नेपाली संस्करणका रूपमा साझा अर्थ व्यवस्था नै लागू गरियो र साझा संस्थाको स्थापना गरियो।
2019 सालमा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भयो। पछि आएर सो केन्द्रको नाममा केन्द्रीय भन्ने शब्द थपियो। सोही वर्षसहकारी बैङ्क ऐन 2019 पनि जारी भयो। 2020 सालमा एउटा सहकारी बैङ्क स्थापना गरियो। जसलाई चार वर्षछि गएर कृषि बैङ्कमा परिणत गरियो। 2041 सालमा साझा ऐन जारी भयो भने 2048 सालमा सहकारी ऐन लागू गरियो। यसै ऐन अर्न्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड स्थापना गरियो र साझा केन्द्रलाई यसैमा विलय गरियो।
सहकारी आम्दोलनको पृष्ठभुमी केलाउँदै जोशीले लेख्नु भएको छ की 2049 सालमा आइपुग्दा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संस्था लि., नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि. र नेपाल उपभोक्ता सहकारी सङ्घ लि.का छुट्टाछुट्टै गठन भए। 2050 सालमा राष्ट्रिय सहकारी सङ्घ लि. स्थापना भयो। चार वर्षछि यस सङ्घले अन्तर्रराष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो। 2060 सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो भने सुर्खेत, कैलाली, कास्की, र्सलाही र चितवनमा क्षेत्रीयस्तरका सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयहरू स्थापना भए।